'भारत' बाट काटियो वरुणको केमियो , तर किन ?
‘भारत’ बाट काटियो वरुणको केमियो , तर किन ?
प्रकाशित : बिहिबार, जेठ २३, २०७६०८:५८
फिल्म । बलिउडका भाइजान सलमान खानको नजिकका कलाकार मध्यका एक हुन् वरुण धवन । उनलाई सलमानको कपि पनि भन्ने गरिन्छ किनकी बाल्यकालमा उनले धेरै नै संगत गरेका छन् । वरुण सानो छदा सलमानले डेविड धवनको निर्देशनमा तयार धेरै फिल्ममा अभिनय गरेका छन् । यसैले गर्दा सलमानको प्रस्तावलाई नकार्न नसकेर वरुणले भारतमा केमियो गरे ।
सलमानका ज्वाई अतुल अग्निहोत्री समेत निर्माता रहेको फिल्मको छायाँकनको लागि उनि अबुधाबी समेत पुगेला थिए । उक्त समयमा प्रदर्शनरत फिल्म ‘सुइ धागा’ को प्रमोसनलाई ब्रेक लगाउदै शुटिङ गर्न वरुणले समय निकालेका थिए । तर गत जुन ५ बाट सार्वजनिक प्रदर्शनमा आएको फिल्ममा वरुण छैनन् । उनि फिल्ममा नदेखिएपछी बि-टाउनमा गसिप पनि सुरु भयो ।
जसलाई निर्देशक अलि अब्बास जफरले प्रस्ट्याएका छन् । ‘हामीले पुरा फिल्म हेरेपछि वरुणको केमियो नराख्ने निर्णय गरेका हौ’ अलिले प्रतिक्रिया दिदै भने ‘वरुणलाई पनि शुटिङकै समयमा हामीले रहन सक्ने र नरहन पनि सक्ने बताएका थियौ ।’ यस विषयमा वरुणले केहि प्रतिक्रिया मिडियालाई दिएका छैनन् । सुल्तान र टाइगर जिन्दा है निर्देशन पश्चात स्थापित बनेका अलिको यो तेस्रो निर्देशन हो । फिल्ममा कट्रिना कैफ , तब्बु , दिशा पटानी , ज्याकी श्रोफ , सुनिल ग्रोवर लगायतको अभिनय रहेको छ । योफिल्म कोरियन फिल्म ‘ओड टू माय फादर’ को रिमेक हो । (एजेन्सी)
पूर्वमा ‘माइकल अधिकारी’
मोफसलमा ‘बीर विक्रम २’ युनिट
बढे नेटफ्लिक्स प्रयोगकर्ता
‘सूर्यवंशी’ पनि रिलिज नहुने